नेपाल आज | प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारको पत्रकारलाई खप्की– चिया खानु भो हैन, जानुस्
बुधबार, १४ फागुन २०७६ गते प्रकाशित - नेपाल आज
फेरि अर्कोचोटि संसद प्रवेशका नाममा नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमको बदनाम गर्ने खेलो मौलाएको छ । यो त्यही पुराना खेलाडीहरुले चलाएको खेलो हो, जो सिंहदरबारभित्रै बसेर गरिँदैछ । बामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने कुरामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनालसहित सबैजसो नेता सहमत भएका हुन् । तर, स्वयं बामदेवले प्रधानमन्त्री बन्ने कुराको सुनिश्चितताबेगर संसदमा मात्रै जानुको केही अर्थ नहुने बताउँदै आउनुभएको थियो ।
नेकपाको पछिल्लो सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्री बनाउने मामिला मात्र हैन, राष्ट्रियसभाको सिट थप्नुपर्ने विषयमा राजपाले उठाइरहेका कुरा र संशोधन गरौं भनेर माधव नेपाल नेतृत्वमा सुवास नेम्बाङ र खिमलाल देवकोटा रहेको कार्यदल बनाउने कुरा गरेकै हो । तर, यस्तो कुरालाई प्रचारमा नलैजाने, भित्री रुपमा त्यो विषयको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भन्ने सचिवालय बैठकको कुरा थियो । त्यसैको केही समय यी कुरा सार्वजनिक भए ।
बामदेव प्रधानमन्त्री बन्ने कुरामा प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथजस्ता प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताहरु असहमत छैनन् । किनभने बामदेव प्रधानमन्त्री बन्दा उनीहरुको केही पनि बिग्रदैन । तर, प्रधानमन्त्री नबनेको र बन्ने तीब्र चाहना पालेका ईश्वर पोखरेल यो कुराबाट मारमा पर्ने एकमात्र व्यक्ति हुन । पार्टीभित्र जो शक्तिमा आउँदा पनि जारी रह्यो । उनले केपीसंग नजिक हुन आफ्ना लागि माधव नेपाल मरेतुल्य हुन भनेर विश्वासिला पत्रकार मातृका पौडेललाई बोलाएरै अन्तर्वार्ता दिएका थिए । जो अनलाइन खबरमा दुई वर्ष पहिला प्रकाशन भएको छ । र, यसरी पत्रकार बोलाएर आफ्नो तुष्टि मेट्ने काम उनले अहिले पनि छाडेका रहेनछन् ।
अहिले प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रहेका सूर्य थापा खासमा ईश्वरका भित्रिया हुन् । तर उनले पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड पूर्वमाओवादीले आफ्नो विरासतका रुपमा गर्व गर्ने जनयुद्धजस्ता विषयमा अशिष्ट टिप्पणी गर्ने, पार्टी एकतालाई विषयको अर्थमा प्रस्तुत गर्नेजस्ता काम गरिदिँदा प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीचको सम्बन्धमा पनि चिसोपना आइरहेको थियो । यही कुरालाई दृष्टिगत गर्दै प्रधानमन्त्रीले केही दिनयता सूर्यलाई धेरै स्पेस नदिने नीति अख्तियार गर्नुभएको छ । त्यसैले आफ्नो जन्मदिन मनाउन तेर्थुम जाँदा प्रमलेस सूर्यलाई जान दिनुभएन । जबकी हेलिकोप्टर चढेर जाने सूचीमा पहिला उसको नाम थियो ।
त्यसपछि बद्नाम नै सही सल्लाहकार विष्णु रिमालका भान्जा पर्ने, कांग्रेस पृष्ठभूमिका मनोज पाण्डे तेर्हथुम लगिए । यता तेर्हथुम जान नपाएको रिस अर्कातिर बामदेव शक्तिमा आउँदा आफू सोत्तर हुनुपर्ने, ईश्वरलाई पनि घाटा पर्ने पीरले सताएपछि पार्टी गोपनीयता खोल्ने काम शुरु भयो, सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री सचिवालयभित्रैबाट । सूर्यले आइतबार दिउँसो शुरुमा कान्तिपुरकी विनु सुवेदीलाई बोलाएर कुरा चुहाए । तर, त्यसपछि अरु पत्रकारलाई पनि उनले पालैपालो बोलाएका थिए, त्यही कुरा भन्नलाई ।
एउटै विषय तपाईंलाई मात्र भनेको भन्ने गरी पत्रकारहरु बोलाइँदा एउटाले अर्को भेटन नपाओस् भन्ने उनको योजना थियो । तर विनुले चिया पिउँदा पिउँदै अर्का पत्रकार मुन्तिर आइपुगेको देखेपछि सूर्यले बिनुलाई पिउँदै गरेको चिया नसकिँदै ‘लु तपाईं यहाँबाट गइहाल्नुस् , यहाँ अर्कै मिटिङ गर्ने बेला भयो ।’ भनेर धकेलेरै कार्यकक्षबाट निकाले । बिनु त्यहाँबाट सर्भिस सेन्टरमा चिया पिउन पुगिन । त्यहाँ नेपाल टेलिभिजनकी निमा काफ्ले र भूमिसुधार मन्त्रीको सचिवालयमा समेत रहेका पत्रकार राजेश शर्माहरु थिए । बिनुले भनिन– ‘सूर्य दाइले मलाई पिउँदा पिउँदैको चिया नसकिँदै कोठाबाट निकालेर क्या दुव्र्यवहार गर्यो यार ।’ बिनुले यसो भन्दाभन्दै अनलाइनखबरका मात्रिका पौडेल त्यहाँ पुगे ।
‘सूर्य थापालाई भेट्नुपर्ने कुरा चाहिँ के थियो ?’ मात्रिकाले बिनुलाई सोधे । बिनुले सूर्यले भनेको कुरा सुनाइन र समाचार कान्तिपुरबाट ब्रेक भएलगत्तै अनलाइन खबरमा पनि आयो । बिनुलाई निकाल्नुको कारण थियो, सेतोपाटीका सञ्जीब बगाले, अक्षर काकाहरुलाई पनि त्यही सूचना चुहाउन बोलाएका थिए । सेतोपाटीका अमित ढकाल र सञ्जीव बगालेलाई त ईश्वर पोखरेलसंगै कुरा गराए । त्यही कुराकानीका आधारमा ‘केपी ओलीविरुद्ध कू’ शीर्षकमा विश्लेषण नै आयो । यसपछि आफ्नै काम लिएर प्रेस संगठन सम्बद्ध जनकपुरका पत्रकार शितल साह, सल्यानका जीवन बिसीहरु सूर्यलाई भेटन पुगे । उनीहरुले सोधे– ‘गोप्य निर्णय रहेछ किन बाहिर ल्याइयो त ?’ सूर्यले जवाफ दिए– ‘जनमतको परीक्षण होस् भनेर होला ।’
देखापढी डटकमका सम्पादक रामेश्वर बोहरालाई पनि सूर्यले भन्न भ्याइसकेका थिए । उनले चाहिँ पुष्टि गर्न पहिला माधव नेपाल निकट विष्णु रिजाललाई सोधे, उनले होइन भने । त्यसपछि झलनाथ खनाललाई फोन गरे । ‘नभन्ने भनेको थियो तर तपाईंले त थाहा पाइसक्नु भएछ ।’ झलनाथले यसो भनेपछि कार्यदल बनेको हो कि होइन भनेर सोधिरहनु परेन । अनि रामेश्वरले समाचार बनाए ।
यो दृश्यमा प्रकट भएका पत्रकार मध्ये अमित ढकालबाहेक सबै पूर्वएमाले निकटका हुन । यस्तो भएपछि कसले लगायो ? कसरी लगायो ? जस्ता कुरा नेताका कानमा नपुग्ने कुरै भएन । कुरा उठेपछि ईश्वरले ट्वीट गरेरै आफ्ना कुरा आफैंले राखे । लेखे– ‘अभ्यास, अनुभव र औचित्यका आधारमा मात्र संविधान संशोधन हुन सक्ने कुरा गर्दै आएका भित्रैबाट यतिबेला एकाएक संविधान संशोधनको कुरा सुनिदैछ । मानिसहरु उदेक मान्दैछन् । के का लागि संविधान संशोधन ? खबरदारी बहस गर्ने बेला आएजस्तो छ । कुरा लुकाएर, ढाँटछल गरेर कति दिन चल्छ ? कसरी चल्छ ? राजनीति गरिन्छ । जुवा खेलिन्न ।’
आइतबार नै प्रचण्डले खिमलाललाई ‘तपाईं कार्यदलमा हुनुहुन्छ, भोलि विहान आउनुस है’ भन्नुभएको थियो । कारण हो, बामदेवको उपाध्यक्ष पदलाई विधानमा मिलाउने काम बाँकी थियो । त्यसका लागि महासचिव विष्णु पौडेलले खिमलाललाई जिम्मा लगाउनु भएको थियो ।यो काम आइतबार नै टुंगिएर विधान छपाइका लागि प्रेसमा पठाइएको छ ।
जनआस्था साप्ताहिक लेख्छ ।
बामदेव गौतम सूर्य थापा
अमेरिकामा मान्छेबाट बाघ ‘कोरोना संक्रमित’